हाम्रो भाउ कुकुरको जत्ति पनि छैन : दीपक ख्यादू
(जुन चिजमा लगानी गरिन्छ त्यसबाट सजिलै उन्मुक्ति पाइँदैन । त्यही महसुस गरेर सडक पाइलट बनेका युवा हुन् दीपक ख्यादू । उनी कसरी यो क्षेत्रमा आए ? किन उनलाई चालक बन्नुप¥यो ? भूकम्पले उनलाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो । भूकम्प नआएको भए उनले यो लाइनलाई व्यवसायिक नबनाउने थिए कि ? यस्ता विभिन्न पीडा र जीवनको दुःख सुख भरिएको अन्तर्वार्ता दिएका छन् २४ वर्षीय बा ३ ख ४७३६ नम्बरको गाडीका चालक एवं स्वरोजगार दीपकले सडक पाइलटसंगको अन्तरड्डमा साँघु प्रतिनिधिसंग –सम्पादक)
० गाडी चलाउन कहिलेदेखि थाल्नुभयो ?
–जानेको त पहिलेदेखि नै थिएँ तर सार्वजनिक यातायात चलाउन थालेको दुई वर्ष भयो ।
० ढोकामा पनि बस्नुभयो कि ?
–बसें तीन महिना । त्यसपछि सीधै चलाउन थालें ।
० कसरी पाउनु भयो त चलाउन ?
–बुबाको गाडी थियो । त्यो गाडी मेरो अंकलले चलाउनु हुन्थ्यो । उहाँको २०७२ सालको भूकम्पमा परी मृत्यु भयो । त्यसपछि हामीले नयाँ ड्राइभर राख्यौं । तर त्यो हाम्रा लागि घाटा भयो । ड्राइभरले आफैले पैसा राख्ने, तेलसमेत नराख्ने, सर्भिसिङ पनि नगर्ने भएपछि बाध्य भएर हामीले एक वर्षपछि उसलाई हटायौं । अनि आफैले बाध्य भएर चलाउन थालें ।
० भूकम्पमा के के भयो ?
–तार तल्ले घर थियो । सबै लड्यो । अंकल मर्नुभयो । म पनि पुरिएको थिएँ । मेरो रेस्क्यु भयो । अरुलाई केही भएन ।
० कसरी बस्नुभयो त ?
–हामी डेढ वर्षसम्म बाहिर बस्यौं । पहिले त टेन्टमा बस्यौं । जब बर्खा लाग्यो अनि टहरा बनाएर बसियो । अहिले घर बनिरहेको छ ।
० सरकारले राहत त दियो होला नि ?
–सरकारले खाजा खान ५० हजार रुपैयाँ दिएको थियो । त्यो त कहाँ पुग्यो । सरकारको राहत एक बोरा चामलमा दुई माना मिलाए जस्तै हो ।
० घर बनाउन पनि पैसा दिए होला नि ?
–दियो । तर एकैपटक दिए पो काम हुन्थ्यो त । खर्च टर्ने थियो । तर एक लाख दिने पैसा २०–२० हजार दिएपछि कसरी पूरा हुन्छ । अनि सिमेन्ट पनि एकैपटक नदिने । किस्ताबन्दीमा । कहिले १०० बोरा । ५० बोरा ।
० कति पढेर छोड्नु भयो ?
–१२ पढ्दा ्दै छोडियो ।
० कस्तो छ गाडीलाइन ?
–हाम्रो भाउ कुकुरको जत्तिको पनि छैन । गुरु भन्ने रेस्पेक्ट रहेन । हामीलाई दोषमात्र दिन्छन् । गाडी पनि धेरै भए । गुरुजी पनि त्यस्तै छन् । सबै एकनाश हुँदैनन् । सबै यात्रु पनि बराबरी हुँदैनन् ।
० ट्राफिक प्रहरीको ब्यवहार कस्तो लाग्छ नि ?
ट्राफिक प्रहरीको त कुरै नगरौं । उनीहरूले गर्दा नै हाम्रो भाउ नभएको हो । एउटै ब्यक्तिले दुईथरी गाडीलाई दुईथरी व्यवहार गर्छ । हामीलाई गाली गर्छ । सरकारी गाडीलाई सलाम गर्छ ।
० तपाईहरूले गल्ती गर्ने भएर होला नि ?
–हामी पनि कमाउनै आएका हौं । दुई जना मानिस चढिदेओस् भन्ने हुन्छ । चढाउनै नदिएपछि के हुन्छ । तर सबै ट्राफिक प्रहरीले त्यस्तो समस्या बुझ्दैन ।
० आम्दानी कस्तो छ नि ?
–आम्दानी घटेको छ । च्वाइस धेरै भए । काठमाडौंमा मान्छे त बढेका छन् तर च्वाइस पनि बढेकाले हाम्रो आम्दानी घट्यो ।
० दुर्घटना पनि बढेको हो ?
–सानो बाइकको कारण दुर्घटना बढेको हो । हामी त एउटा कीरा पनि नमरोस् भन्छौं । बाइकमा रेस खेल्छन् । हामी बच्नलाई राखेको स्पेशमा आएर उनीहरू पर्छन् ।
० गाडी र गाडीबीच पनि हुन्छ नि प्रतिस्पर्धा ?
–त्यो त क्षणिक हुन्छ । त्यसबाट पनि एक्सिडेन्ट त हुन्छ । तर बाइकहरूका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको छ । मेरो दाइ बाइक एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो ।
० गाडीलाइनमा खास समस्या के छ ?
–रोक्ने ठाउँमा रोक्न नपाएपछि समस्या हामीलाई मात्र हैन अरुलाई पनि हुन्छ । बुढाबुढी र अपांगता भएकाहरूलाई झर्न र चढ्न धेरै समस्या हुने गरेको छ । सरकार यतातिर किन ध्यान दिँदैन । दुई पटक त यस्ता मान्छे झार्दा मैले चिट खानुप¥यो । यो गलत भयो ।
० भोलिको योजना के छ ?
–गाडी चलाएर भन्दा घरमा थन्काएर राख्दा राम्रो होला जस्तो भएको छ । कमाई हुँदैन । किस्ता तिर्दैमा ठीक्क भएको छ । कमाई ५० हजार भए खर्च त्यो भन्दा बढी भएको छ । अब विदेश ने जानुपर्ला । बचत नै नहुने भएपछि यहाँ काम गर्नुको के अर्थ ।
० सरकारले सघाउला नि तपाईजस्ता व्यवसायीलाई ?
–सरकारको त कुरै नगरौं । जो आए पनि त्यस्तै हो । कसैले केही गर्ने वाला छैन । जस्तो छ चलिरहन्छ ।
० समितिले केही गर्छ कि ?
–केही गर्दैन समितिले । चार जना मिटिङ बस्छन्, हामीले तिरेको पैसा पचाउछन्, काम त्यत्ति हो ।